Bogga 2 aad by wargeyska313 - Issuu
WARARKA WARGEYSKA DALKA
Ra’isul Wasaare Kheyre oo ka qeybgalay xaflad lagu muujinayay waxqabadka Xukuumadda
Xafladdan oo lagu qabtay xarunta Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta ayaa ujeedadeedu aheyd in xukuumadda looga mahad celiyo bixinta mushaaraadka shaqaalaha ee sannadkii tegay iyo xuska sannadguurada koobaad ee ka soo wareegtay dib u howlgelinta xiriirka guud ee ururrada shaqaalaha, waxaana ka qeybgalay R/wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Kheyre, Wasiirka Maaliyadda, Wasiir ku xigeenka Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, guddoomiyaha guddiga Qaran ee shaqaalaha rayidka ah iyo qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda. C/qaadir Nuur Xuseen “Maax” gudddoomiyaha Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed oo halkaasi ka hadlay ayaa xukuumadda ku amaanay dadaalkeeda ku wajahan hagaajinta nolosha shaqaalaha dowladda iyo guud ahaan bulshada inteeda kale. Guddoomiyaha gudiga Qaran ee
shaqaalaha rayidka ah mudane Xasan Abshirow ayaa sidoo kale soo dhaweeyay sida ay xukuumaddu ugu guuleysatay bixinta mushaaraadka sannadkii la soo dhaafay, isagoo shaqaalahana ku boorriyay iney si hufan u gutaan waajibaadkooda. Guddoomiye ku xigeenka xiriirka guud ee ururrada shaqaalaha Nuur Axmed Diiriye ayaa ka hadlay taariikhda waxqabad ee xiriirka guud ee ururrada shaqaalaha, isagoo tilmaamo ka bixiyay ahmiyadda ay ururrada shaqaaluhu u leeyihiin horumarka dalka, wuxuuna ammaanay waxqabadka xukuumadda. Guddoomiyaha xiriirka guud ee ururrada shaqaalaha C/risaaq Macalin Cilmi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa shahaaddooyin guddoonsiiyay R/ wasaare Kheyre, Wasiirka Maaliyadda iyo mas’uuliyiin kale, isagoo ku amaanay waxqabadkooda. Wasiirka Maaliyadda C/raxman
Ducaale Beyle ayaa sheegay in shaqaaluhu ay joogto u helidoonaan mushaaraadkooda, ayna ku dadaali doonaan sidii loo dhameystiri lahaa dhamaan xuquuqda shaqaalaha, isagoona sheegay in dhiiri galin iyo sharaf weyn ay u tahay Shahaadada la guddoonsiiyay waxaana uu yiri Waxaa sharaf weyn ii ah in Xiriirka Guud ee Ururrada Shaqaalaha ay i siiyaan Shahaaddo Sharaf taas oo igu dhiirigalineyso in aan labalaabo shaqada aan u hayo Ummada Somaaliyeed.” R/wasaare Xasan Cali Kheyre oo gabagabadi kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in hadafka dowladdu ka weynyahay bixinta mushaaraadka oo kaliya, wuxuuna intaasi ku daray in xukuumaddiisu ku dhisantahay isla xisaabtan, isagoo tilmaamay in ururrada shaqaaluhu ay lafdhabar u yihiin dowladnimada.
Isniin 12 February 2018 2
Wasiir Beyle oo ka warbixiyay Waxyaabihii u qabsoomay Wasaaradda Maaliyada Sanadkii 2017
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane, C/ raxmaan Ducaale Bayle ayaa ka warbixiyay waxqabadkii wasaaradda Maaliyadda ee Sanadkii 2017 iyo waxyaabaha u qorsheysan Sanadkan cusub. Wasiir Beyle ayaa shir jaraa`id uu ku qabtay Xafiiskiisa waxaa uu kaga warbixiyay waxyaabaha la taaban karo ee Wasaaradda Maaliyadda u hirgalay sanadkii la soo dhaafay ee 2017, sidoo kalena ka hadlay qorshayaashiisa sanadka cusub 2018. Wasiirka ayaa sheegay in sanadkii tagay Wasaaraddu
ay guulo ka gaartay hirgalinta nidaam daahfuran oo lagu maamulayay qarashaadka soo gala dowladda, iyo bixinta mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidamada. Waxaa uu intaas ku daray wasiirka wasaaradda Maaliyadda in dowladda Somaaliya ay ka go’antahay sidii ay ugu guulaysan lahaayeen habkii dhamaan deymaha lagu leeyahay dalka looga cafin lahaa, si midaa loogu guulaysto ayuu shacabka Soomaaliyeed ka codsaday in ay bixiyaan canshuuraha taa oo ah habka kaliya ee dalku ku gaari karo isku filnaansho dhaqaale.
Wasiirka ayaa ugu dambeyn waxaa uu ka hadlay canshuurta qaadista oo ay wasaaraddu soo kordhisay, taas uu ku tilmaamay mid aanan wax
u dhibeyn ganacsatada, dowladduna ay ka kaabidoonto hab maamulka dhaqaalaha dalka. Sidoo kale Wasiirka
Maaliyadda Xukuumadda Federalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ay wehliyaan qaar ka mid ah Wasiirada Xukuumadda ayaa la shiray Madaxda xafiiska Qaramada midoobay ee Somaliya uu ugu horeeyo Michael Keating iyo Xubno kale oo Un-ka ah. Shirka ayaa ku saabsanaa sidii loo xoojin lahaa wadashaqaynta Qaramada Midoobay iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya , bixinta Canshuuraha waajibka ah, sugidda Amniga, dib u eegista heshiiska SOMA iyo in wada jir looga shaqeeyo qorshayaasha guud ee labada dhinac. Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaliya
Michael Keating ayaa u mahadceliyay Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda XFS Dr Bayleh iyo qaabka uu usoo agaasimay shirka, isagoona balan qaaday in Qaramada Midoobay ay si dhaw ula shaqeyn doonto hey’adaha kala duwan ee Dowladda. Sidoo kale Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Md Cabdiraxman Ducaale ayaa ka dalbaday Madaxda Q.M in ay Dowladda kala shaqeeyaan kor u qaadida Dakhliga Dalka oo la doonayo sanad kaan 2018 inuu ka badnaado sanadii hore. Gabagabadii shirka ayaa waxaa lagu magacaabay guddi labada dhinac ah oo ka wada shaqeyn doona dib u eegista heshiiska SOMA.
Tallaabooyin Taariikhi ah oo la qaaday 12-kii bilood ee la soo dhaafay Ka yimid Bogga 2-aad dareen Dawladdii Nabad Iyo Nolol SHARCIGA ISGAARSIINTA. Sharcigaan oo hirgalintiisa iyo ansaxintiisaba ay ku guul daraysteen Maamuladii hore in badana soo jiitamayey ayay Dawladda haatan jirta sanadkeedii ugu horeeyayaba ku guulaysatay ansaxintiisa, taana waxay muujinaysaa horu socdnimada dawladda max’ed C/laahi Farmaajo.
haatan jirta, waxayna dawladdan ku guulaysatay in ay shaqaalaheeda wax dayn ah ku lahayn 12kii Bilood ee ay jirtay taana waxay ka mid tahay waxyaabaha aan la yareeysan Karin ee lagu amaani karo dawaladda uu Madxweynaha Ka yahay Mud: Max’ed C/laahi Farmaajo.
Macnaha Waxaan ula jeeda dhamaan Shaqaalaha Dawladda iyo Ciidamada ayaa si joogto ah oo aan kala hakad lahayn uga helay Xuquuqdii ay dawladda ku lahaayeen
Dawladda Haatan ka jirta Dalka Saraakiisheeda Sar sare markii ay ogaadeen in musuqmaasuqa uu yahay Kaankaro Dilaa ku ah horumarka umad kasta oo meel ku dhaqan ayay waxay dagaal baaxad leh kala hortageen cadwgaas waxayna ka qaateen go’aano adadag oo lagu dabargooynayo Musuqa iyo kuwa isticmaala ee Alle uu Iimaanka ka Qaaday
Iyada oo qaati bilaahi laga joogo cadwga Umadda Soomaaliyeed ee Alshabaab ayay dawladani timaaday, isla markiina si ay wax uga qabato dhinaca Amaanka Ayay waxay dhistay Ciidamo gaar ah oo dagaal kala hortaga cadawga Alshabaab, isla markaana ay ugu Magac dartay Ciidamada Xasilinta Magaalada., Guulo wanaagsan Ayaana laga gaaray Dhinaca Amaanka
LA DAGAALNKA MAASUQA.
DHAQAALAHA Horumarinta Danaha Bulshada waxaa lagama maarmaan u ah kobcinta dhaqaalaha, waxayna ugu horaynba dawaladda ay dhistay Madasha Wasaaradaha iyo Qaar ka mid ah Kaabayaasha Dhaqaalaha, kuwaas oo inta badan ka shaqeeya Kobaca Dhaqaalaha. BIXINTA XAQUUQDA. Horay looma arag Xuquuqda Shaqaalaha Dawladda oo si toos ah loo dhiibo wixii ka horeeyey dawladda
TAYAYNTA CIIDAMADA. Waa Marag Ma Doonto In Madaxweyne Farmaajo Iyo Maamulkiisaba Ay shaqo badan geliyeen sidii loo tayayn lahaa ciidanka Qalabka sida iyo sidii loogu dhiirigelin lahaa Shaqada ay u hayaan wadanka.Arintaasna waxay kuu muujinaysaa In Dawladda farmaajo ay tahay dawlad inta badan ka shaqeeyso danaha dan yarta Soomaaliyeed. GURMADKA ABAARAHA.
“Annaga Oo Qura uun Baa isu gurman karna” Waa Halku dhigii Dawladda Max’ed C/laahi Farmaajo, Waxayna Si dhab ah isugu xireen dawladda iyo shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay kala joogaan, taas oo noqotay Gurnad taariikhi ah oo laga xasuusnaan doono geyiga Soomaaliya. GAROONKA ADAN CADDE. Dawladda Farmaajo Waxay Ku gulaystay dhawr iyo laabatan sano ka dib in uu shaqeeyo xilli habeen ah Garoonka caalamiga Ah ee Aadan Cadde Guntii Iyo Gabagabadii Dad fara badan ayaa filanayay in dawladda Max’ed C/laahi ay qaban doonto Xaflad iyo Fantasyo Lagu maamusayey Sanadguuradeeda Koowaad oo lagu bixin doono qarash fara badan, laakiin dawladda waxay taas bedelkeeda samaysay maalintii ku beegnayd maalintii la caleemo saaray oo ahayd 8 Feberaayo hal sano ka dib in ay meelaha la isugu yimaado iyo faras magaalada iyo goobo kale oo macruuf ka ah magaalada ay geeysay daawo iyo dhaqaatiir waxyaqaan ah si qof kasta oo xanuunsan loo baaro isla markaana la siiyo daawada uu u baahan yahay, tani waxay la yaab ku noqotay cadawga Dawladaan oo waayey wax ay ku duraan ama uga ceeb sheegaan, waxayna taas cashar u tahay intrii ku fakaraysay in ay sameeyaan xaflado la isku buun buuniyo oo aan wax macno ah u samaynaynin dadka iyo Dalka.
Bogga 2 aad